CANAB "CABERNET SAUVIGNON": SHARAXAADA KALA DUWAN, GAAR AHAAN BEERASHADA, ISTICMAAL - CANAB
Khamriga Cabernet ayaa si wacan loo yaqaan oo uu jecel yahay dhammaan walwalayaasha khamriga cas cas. Ku dhowaad dhammaan waddamada ay ku jirto winemaking, laga bilaabo qabow Kanada si ay u dubaan Lubnaan, waxay u koraan noocyada kala duwan ee canab magac leh oo aan lahayn midab aad u buluug-buluug ah oo qaab wareegsan. Calaamadaha Calaamadaha Cabernet waxay soo saartaa Talyaaniga iyo Spain, Ukraine iyo Moldova, Chile iyo Argentina, iyo sidoo kale South Africa, Australia iyo Mareykanka.
Taariikhda soo saarista
"Cabdiret Sauvignon", oo ah "Petite Vidure" - noocyo canab ah oo leh taariikh saddex sano ah, oo ka soo jeeda caanka ah ee Faransiiska caan ka ah, oo loo yaqaano khamriga Bordeaux (si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay ilo dhaqaale, waxaa laga helayaa dhulka France tan iyo wakhtiyadii Rome).
Maanta waxaa la ogsoon yahay in noocyada kala duwan ay tahay natiijada ka soo baxa laba nooc oo Bordeaux ah - Sauvignon cad cad, kaas oo bixiyay caabbinta barafoobay noocyo kala duwan, iyo fran oo cabir furan, taas oo siinaysay isku-dhafka caraf udgoon iyo qaab gaar ah.
Ma taqaanaa? Ma jirto xog lagu kalsoon yahay oo ku saabsan sida Cabernet Sauvignon loo soo goostay ayaa la gaaray waqtigayagii, sidaas darteed guud ahaan la aqbalay waa in iskutallaabtu ay dhacdo fursad, inkastoo winemakers runta sheegaya in ay jiraan shilal aaggaas ka mid ah. inay noqoto ma awoodo.
Qeybta labaad ee qarnigii XVII ee Faransiiska waxay ahayd mid aad u firfircoon oo ku yaal barta winemaking. Waqtigaan, soosaarka khamrigu wuxuu si firfircoon u soo galey munaasabadda, maaha oo kaliya xirfadlayaasha dhowr jiil, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah burcadaha iyo hantiilayaasha dhexe.
Ma uusan dhaafin nooca khaaska ah beeraha iyo macbudka, halkaas oo rahmaadyada ay sidoo kale si firfircoon u fuliyeen dhammaan noocyada tijaabooyinka taranka iyo tijaabooyinka. Dhanka kale, Kacaanka weyn ee Faransiiska ah ee bur buriyay xilligaani wuxuu si fiican u soo jiidan karaa diiwaanka xanuunka heysta ee winemakers, taas oo sharraxaysa la'aanta xogta ku saabsan geedi socodka dhirta samaynta.
Si kastaba ha ahaatee, Cabernet Sauvignon si dhakhso ah ayuu u sameeyey tartan toos ah oo guuleysta si aad u sarreeya Bordeaux canab Merlot iyo Malbec. Oo canabkihii Cabernet waxay bilaabeen marxaladoodii guuleysiga adduunka oo dhan bartamihii qarnigii sagaalaad, tan iyo markaasna waxay ku guuleysteen tiro badan oo wadamo ah oo ku yaalla dhammaan qaaradaha.
Qeexida astaamaha nafleyda
Cabernet Sauvignon ayaa iska leh noocyo canab ah oo soo go'ay, dalaggiisa dalag badanaa ayaa la goostay aan ka horeyn bisha oktoobar. Geedka canabka ah wuxuu si sahlan u qaadaa si fudud oo uu wax ku dhufto iyada oo aan wax dhibaato ah, dhalidda waa mid aad u sareeya. Caleemaha waxay ku wareegsan yihiin talooyin casaan ah. Faafidda duurka waa mid aad u sarreeya, caleemaha waxaa lagu daboolay caag adag, dhalinyaradu waxay leeyihiin huur aad u yar, oo qiyaastii caddaan ah.
Ma taqaanaa? Magacyo kala duwan oo caan ah "Petit Cabernet", "Lafitte" ("Gaadiidka").
Cabernet Sauvignon waxay samaysataa muddo dheer, illaa 15 cm, kooxo dabacsan oo qaabeeya koonfura, mararka qaarkood laan dhinac ah. Berry wareega - ilaa 1.5 cm dhexroor iyo ilaa 3 g miisaanka. Midabka berry waa buluug madow, maqaarku waa qallafsan, daboolay daadad yar. Lafaha ku jira berry waa la joogaa, laakiin lambarkoodu waa yar yahay. Grapes casiir leh, si wacan u dhadhan.
Canabaha Cabernet Sauvignon waa mid aad u fudud si ay u koraan oo u ilaaliyaan in mararka qaarkood lagu magacaabo canab caajis ah. Waxay u adkaysatay abaarta waxayna ku dhowdahay in aan jeermis galaynin marka la waraabiyo, ma cabsanaayo xilliga jiilaalka daran ama dhaxanta guga, waxay u nugul yahiin cudurada ugu halista ah ee canabkiisa (gaar ahaan, phylloxera iyo caarada) iyo cayayaanka (caleen-canab), oo si kedis ah u koraya oo si fiican ugu habboon xaaladaha isbedelaya.
Ka mid ah cilladaha of kala duwan, waxaa suurtogal ah in la kala saaro laga yaabaa in laga yareeyo dufan aad u sareeya ee berry iyo dhalid hoose ka badan ee noocyo kale oo Bordeaux oo sharaf leh. Dhibaatada kale ee noocyada kala duwan waa tan la yiraahdo pea, taas oo lagu soo bandhigay muuqaalka kiriimyada yaryar oo aad u cagaaran oo aan caano lahayn oo ku yaal canabkiisa.
Cilladaha soo haray ee noocyada kala duwan, haddii lagu magacaabi karo, waxay la xiriiraan tayada dhadhanka ah ee berry sida qalabka khamriga - oo aad u culus, taajir ah iyo dhadhanka dhadhanka ah, maqaayad aan ku filnayn, laakiin yareyntan ayaa si macquul ah ugu magdhowday canabka kale ee khamriga, gaar ahaan Merlot iyo "waalid" "Cabernet Franc.
Waxaan kale oo aan rabnaa in aan kuu sheegno noocyada caleemaha caan ah sida "Isabella".
Sida loo doorto canab marka la iibsanayo
Xaaladda ugu weyn ee iibsashada geedo tayo sare leh - rafcaan u noqo meeshan meesha lagu xaqiijiyey. Ganacsatada aan duubnayn waxay si fiican u falanqeeyeen xirfada khiyaamaynta iibsadayaasha aan khibradda lahayn, sidaa daraadeed, si loo eego tayada cusub ee alaabta ceeriin ee tayadoodu yar tahay iyaga uma adkaan doono.
Hase yeeshee, sharciyo ah in la doorto sabuub canab ah waxay u baahan yihiin inay ogaadaan si loo ilaaliyo naftaada ugu yaraan mid cad oo cad cad.
Xididdada geedo canabku way qallalan yihiin, kadib markii dhirta ay noqon karto mid aad u adag in la dego.
Waxaa fiican inaad iibsato geedo isla markiiba ka hor beerto, maadaama aanay u dulqaadan kaydinta. Haddii aad doonaysid in aad ku beeri canab guga, waa inaadan iibsan doonin seedling xilliga dayrta.
Qaar badan oo caleemo ah oo ka mid ah sabuurada dayrta ayaa sabab u ah inay diidaan inay iibsadaan: waxay u badan tahay in qadar badan oo qoyaan ah ay horey u maraan caleemaha, iyo sapling waa fuuqbaxay.
Mar kasta iibso geedo xilliyeed iyo xulasho ballaaran.
Waydii iibiyuhu in uu wax ka qabanayo manfacyada qaarkood ee abuurista si loo hubiyo in geedka canabka ah uu nool yahay:
Haddii aad jarjartey dusha sare ama ka saar maqaarka maqaarka, waa inaad aragto hilibka cagaaran oo qoyan oo qoyan;
xididka gooyaa cusub waa inuu ahaado iftiin iyo qoyan, sida bacda barafka la gooyey;
marka qalloocan, geedka canabka ah ayaa yareyn kara, laakiin ma jebin;
burooyinkeeda ku jira seedling caafimaad leh kama dhacaan taabashada ugu yar;
meesha loo yaqaan 'grafting site' waa inay si fiican u daboolaan - ku dheji karootada marxaladda isgoysyada ee leh miisaanka mabda'a ah dharka qoyan qoyan oo si taxaddar leh u fiirso kadib: waa in aadan arkin wax dillaac ah ama ishortaagan;
Dhinaca kale, haddii aadan arag tallaalka, micnaheedu waa inuusan jirin, inkastoo dhamaan iibiyeyaasha ballan qaadka ah in wax kasta ay wada koraan si aan loo ogaan karin: waxaad kaliya isku dayeysaa inaad iska iibiso sapling unvaccinated meeshii laga qalay.
Waa muhiim! Haddii iibiyuhu uu diido in uu shuruud la'aan ku fulin hawlaha aad bixisay - ka codso nabadgelyo iyo in aad meel kale ka iibsato: waxay ku khiyaaneeyaan!
Qiimaha sare sidoo kale ma aha dammaanad tayo leh, iyo sidoo kale shahaado badan oo leh shaabad. Ku kalsoonow indhahaaga iyo sumcadda iibiyaha: haddii aad heshay seedling qurxoon, laakiin maaha mid xidid ah, ka fikir in ay habboon tahay in la dalbado qalabka cusub ee wax lagu karsado ganacsi isku mid ah.
Goorta iyo meesha ay ka fiican tahay in la beero goobta
Waxaa jira laba siyaabood oo canab beerto - guga iyo dayrta. Mid kastaa wuxuu leeyahay sifooyinkiisa, faa'iidadiisa iyo faa'iidadiisa gaarka ah. Sidaa darteed, beerto guga waa wanaagsan sababtoo ah geedka canabka ah wuxuu si dhab ah u qaadan doonaa xidid si fiican u horeysa dhaxan, laakiin habkani wuxuu la xiriiraa khataraha qaarkood ee kaydinta geedo ilaa guga.
Taasi waa sababta khubaro badani waxay door bidaan in ay ku beeri canab ku dhowaad xilliga qaboobaha, doorashada maalinta gaar ahaan diiran ee tan, si aanay u kaydin seedling dhowr bilood.
Baro xeerarka beeritaanka canab ee xilliga dayrta.
Haddii ay jirto doorasho, canabku waa la beeray xilliga dayrta ka hor intaan la socon dalagii hore (qiyaastii bartamihii bishii Oktoobar), sidaas awgeed xididdada aan caleemaha lahayn looma wada baabi'inin sababtoo ah dhibco fiiqan heerkulka.
Beeridda iyo beerista canabku waxay ku bilaabmaysaa doorashada goobta. Meesha ugu wanaagsan ee Cabernet Sauvignon waa koonfurta ama koonfur-galbeed ee goobta oo leh iftiin fiican iyo hawo-qaadid. Beerta canabka ah waxaa laga dhigi doonaa waqooyi ilaa koonfur.
Waa muhiim! Goob wanaagsan oo canab ah waa derbiga koonfureed ee dhismaha: kiiskan geedka canabka ah waxaa lagu ilaalin doonaa hoy ammaan ah oo ka imanaya dabaylaha ugu daran ee waqooyiga. Laakiin hooska dhirta ama dhismayaasha kale dhirtaas waa in aan lagu beerin si calaamad ah!
Waxyaabaha ay ka kooban tahay canabkiilaha carrada Cabernet Sauvignon kuma soo rogin shuruudo sarreeya, hase yeeshee biyo fiican iyo qiimaha guud ee nafaqada ee ciidda waa la soo dhaweynayaa.
Sida loo abuuro: geedo geedo geedo ah oo ku yaal goobta
Sidee loo koraan canabki ku yaal dalka - jawaabta su'aashan waxay kuxirantahay xuduuda aad leedahay iyo tan khamriga aad rabto. Sida lagu sheegay, tiro yar oo duurka ah ayaa lagu beeray karaa hal safar fogaan ah ugu yaraan hal mitir iyo nus mitir oo ka yimid dhismaha ugu dhow.
Laakiin haddii aad qorshaynayso in aad dhisto beer canab ah oo dhab ah, geedo waa in lagu rakibaa saf, masaafada u dhaxaysa ugu yaraan saddex mitir, sidaas darteed dhammaan kooxaha ayaa helaya iftiin ku filan. Fogaanta udhaxeysa canbaha Cabernet Sauvignon waa inay ahaataa hal mitir iyo badh.
Ma taqaanaa? Geedka qallalan iyo ciidda, canabku waxaa lagu beeray qaab la isku qalajiyey (godad qoto dheer), laakiin haddii ay jiraan biyaha dhulka hoostiisa ah, iyo sidoo kale xayawaanka iyo dhoobada dhoobada ah, dhanka kale, sariirta waa in kor loo qaado.
Marka la beero abuurid, tuubo leh dhexroor ballaaran ama dhalo dhuuban oo balaastig ah oo leh hoos-gooyo ayaa lagu aasay godka si ay u waraabiyaan geedka canabka ah iyada oo loo marayo qalab noocan oo kale ah.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la tixgelinayo qabsoomidda Cabernet Sauvignon, saddex sano ka dib markii geedka canabka ah uu qaaday xididada, sida tuubbada ayaa si ammaan ah loo saari karaa - canabku waxay awood u leeyihiin inay si madaxbanaan u helaan qoyaanka ay u baahan tahay qulqulo qoto dheer oo ciid ah, oo aan u baahnayn mudnaan gaar ah ee waraabka.
Sidoo kale fiiri canabku ugu habboon khamriga.
Xeerarka daryeelka xilliyeed ee canab "Cabernet Sauvignon"
Sida horey loogu soo sheegay, canabta Cabernet way fududahay si ay u koraan, sababtoo ah kala duwanaanta aan qabyo ahayn ee cimilada isbeddela oo aan aad uga cabsanayn cayayaanka. Laakiin tani macnaheedu ma aha in laga tago geedka canabka ah sida loogama baahna.
Waraabinta habboon ayaa aad muhiim ugu ah tiknooloojiyada berry soo kordhaya. Qoyaan xad dhaaf ah, sida ay u yar tahay, waxay saameyn xun ku leedahay beergooyska. Sida lagu sheegay, inta lagu guda jiro saddexda sano ee hore ee nolosha geedka canabka ah waxa ay u fiicantahay in ay biyo u dhex mariso tuubo god qoday ama dhalo caag ah, markaa qalabkan si ammaan ah ayaa loo saari karaa.
Ku xirashada geedka canabka ah ee trellis ka dib markii ay ka saareen hoyga jiilaalka, waxay soo saartaa waraabinta ugu horeysa. Bilowga xilli sii kordhaya, canabku waxay u baahan tahay gaar ahaan wax badan: hal baadiyaha waxay qaadan doonaan ilaa 40 litir oo biyo ah.
Waa muhiim! Biyaha waraabinta guga canabku waa in yar oo kuleyl ah, marka lagu daro, dhar gashiga waa fiicantahay in lagu daro ash alwaax yar (qiyaastii nus litir ah baadiyaha).
Later, ka hor inta Bisaylkiisa ee berry, laba waraabin dheeraad ah ayaa la fuliyaa: ugu horeysay - dhawr maalmood ka hor ubaxu bilaabmaa, iyo labaad - ka dib markii ubax ayaa soo afjaray. Marka canabku wuxuu bilaabaa inuu qaabeeyo nooca berry ah, waraabinta waa in la joojiyaa iyada oo aan loo eegin qoyaanka ciidda, xeerkani wuxuu khuseeyaa nooc kasta oo sabiib ah.
Ugu dambeyntii, kaliya ka hor xilliga qaboobaha, dhowr maalmood ka hor dhibicda, ka dib ayaa canab ah mar kale la waraabiyo (tan waxaa loo sameeyaa si geedka canabka ah ma gelayaan jiilaalka leh ciid qallalan, dhulkani wuu qaboojiyaa dheeraad ah oo canab ku dhiman kara dhaxan aad u daran).
Beerta canabka ah oo si buuxda u koraya ayaa la waraabin karaa xittaa yar. Dhab ahaantii, inta lagu jiro xilliga oo idil, geedka canabka ah ayaa ka soo saari kara ciidda qadar ku filan oo ah qoyaan koritaan caadi ah, laakiin waraabinta waa qasab ka hor xilliga qaboobaha.
Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in ay ku quudiyaan canab iyada oo taxaddar leh, sababtoo ah xad-dhaaf ah ee Bacriminta waxay sii yaraataa koritaanka geedka canabka ah oo yaraynaya dhalidda. Haddii, ka hor inta aan laga beeri canab, waxaad ka taxadari jirtay ciidda leh bacriminta organic iyo macdanta, reservekani wuxuu ku filan yahay saddexda ama afarda sano ee hore ma aha in wax lagu daro dhulka.
Laga soo bilaabo canjiga dabiiciga ah si aad u wanaagsan jawaabta digada, sidoo kale peat iyo compost habboon. Macdanta macdanta - carbamide, amooniyam amaseiyoon, superphosphate, iyo Bacriminta potash (potassium sulfate, cusbo potashium, ash alwaax). Waxa kale oo aad isticmaali kartaa macdanta macdanta adag, sida Florovit, Kemira iyo kuwo kale.
Eeg sidoo kale noocyada Bacriminta macdanta iyo waxa nafaqada ay ku jiraan.
Guga, isku mar ah leh waraabinta ugu horeysay, waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo canab iyada oo dheellitirka macdanta ay ku jiraan nitrogen, fosfooraska iyo potassium. Boog waliba wuxuu u baahan yahay 50 g oo ah fosfate iyo 20 g oo bacriminta potash ah. Hareeraha gacmeed ayaa lagu qodaa hareeraha baadiyaha, bacriminta ayaa la geliyaa, oo la rusheeyaa dhulka dusha sare.
Bacrinta soo socota ayaa la samayn karaa ka hor inta aan ubaxin, waqtigan oo la adeegsanayo kiimikada iyo bacriminta fosfatiga ah (qiyaastii 15 g iyo 25 g, siday u kala horreeyaan, oo ku saleysan baaldi biyo ah).
Waa muhiim! Waxaad ma quudin kartaa canab dhan Bacriminta nitrogen ee qeybta labaad ee xagaaga, tani waxay horseedeysaa dib u dhac weyn oo ah berrida. Natiijo isku mid ah waxay bixisaa dheeri ah Bacriminta.
Cunto dufan ayaa sidoo kale lagu buufin karaa, iyo noocyadan bacriminta si fiican ayaa loogu daraa daaweynta ka hortagga cayayaanka. Tani, waxaa ugu fudud in la iibsado alaabada diyaar ah ee dukaanka khaaska ah ("Aquarine," Plantafol, "Novofert, iwm.).
Cabernet Sauvignon ayaa si gaar ah loogu baahan yahay manjooyin habboon, maaddaama geedka canjeerka ah ee culus uu soo saaro dalag xun. Gooyo waxaa la samayn karaa wakhti kasta oo sanadka ah, laakiin manjooyin kasta waxay leedahay sifooyin gaar ah.
Ma taqaanaa? Gooyo guga waa ka doorbid badan guga, sababtoo ah inta lagu jiro socodka dheecaan badan, geedka canabka ah ee caleenta ah ayaa si fiican u bogsanaya kuna kora pasaka ("oohin"). Dareeraha noocan oo kale ah ayaa daadadkoodu ka soo baxaan, way soo jiidaan oo ma koraan, sidaa daraadeed manjooyin guga oo aan wax qori karin ayaa burburin kara canabka.
Haddii aanay suurtagal ahayn in ay ku foorarsato xilliga dayrta, ama baadiyaha beeray xilliga dayrta caleemaha badan, aad si taxadar leh uga saari kartaa guga hore, marka weli weli ma gebi ahaan diiran, laakiin hargabka dhabta ah waa uu dhammaaday. Wakhtigan, laamaha qalalan iyo bukaanka ee geedka canabka ah ayaa sidoo kale laga saaray.
Xilliga xagaaga ee canabkuu qanjaruufo, ka saar caleemaha xad-dhaafka ah iyo caleemaha. Qoryaha si habboon loo sameeyay waa inay si wanaagsan u iftiimaan qorraxda oo dhan dhinacyada si ay u dhigmaan miraha si fiican u bislaadaan. Xilliga dayrta, canabku waa la gooyaa inta lagu jiro goosashada (caleemaha daciifka ah ayaa laga saaraa oo loo yaqaan "dushooda" - caleemaha aan canab). Markaas, ka dib markii caleemaha dhaco, manjooyin badan oo kaabayaasha ah ayaa la sameeyaa.
Waa muhiim! Waqtiga saxda ah ee manjooyin dayrta waa bilowga ah ee dhaxan ugu horeysay. Socodka qulqulaya waa in ay joojiyaan in geedka canabka ah, laakiin waa in aadan gaarin dhaxan dhab ah, sababta oo ah laamuhu noqon doonaa mid jilicsan.
On seedling yar yar, sababtoo ah manjooyin, 3-7 dhinaca caleemaha dhinaca waa in laga tago, mar dambe. On geedka canjeerada weyn ee bisha Sebtembar, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caleemaha dhinac kasta oo laga soo tuuray meel ka yar nus mitir dhulka. Ka dib, laga bilaabo caleemaha sii kordhaya ee height ka badan 0.8 m kor ku yaal dhulka, dushooda ayaa la googooyaa hal tobneed, iyo dhammaan laamood dhinac ayaa laga saaray.
Kadib, inta lagu jiro xilliga dayrta ee labaad ee ku dhowaad hal mitir oo dhulka ah, waxaad ubaahan tahay inaad doorato laba ka mid ah caleemaha ugu xoogan: gooy midka ugu hooseeya, tegaayo 3-4 burooyinkeeda, oo ka jar qaybta sare ee dhinaca ka soo horjeeda 10 oo kudha - tani waa meesha ay kooxuhu ka sameysan doonaan.
Cudurrada iyo Cayayaanka Cayayaanka: Daaweynta iyo Ilaalinta
Waxaan kor ku soo sheegnay in Cabernet Sauvignon uu aad u adkaysi u yahay xitaa cadawga ugu xun ee canab. Si kastaba ha noqotee, si aan dhibaato u qabin cudurka iyo daaweynta, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin ka hortag ah si loo ilaaliyo geedka canabka ah sida noocyada kala duwan ee cayayaanka sida cayayaanka iyo caarada caarada, cagaarka, caleenka, iyo sidoo kale cuduro fangas ah iyo gooyo.
Dukaamada khaaska ah, waxaad ka iibsan kartaa diyaargarow guud oo loogu talagalay daaweynta cudurada ee canab, oo leh hantida fungicidal iyo insecticidal labadaba, marka lagu daro, kicinta koritaanka geedka canabka ah. Maadaama maan dooriyayaashu ay badanaa sun yihiin, daaweynta waa in la sameeyaa horraanta gu'ga. Oo haddii geedka canabka ah uu wali saameynayo, daaweyntuna mar dambe ayaa la sameeyaa - kiis kasta, waa in la buuxiyo ugu yaraan hal bil ka hor goosashada.
Ma taqaanaa? Iyada oo ah beddel badbaado leh cayayaanka, waxaa suurtogal ah in la dagaalo maro marxaladda hore ee infekshinka iyadoo lagu buufinayo caleemaha saabuun iyo biyo caadi ah.
Laakiin yaa runtii halis u ah Cabernet - waxay ahayd. Si taxaddar leh oo si joogta ah u kormeer goobta si aad u joogtid hudheello geel ah. Haddii cayayaankaasi ay weeraraan dalaggaaga, ku dheji tuunbo gaar ah ama, haddii ay dhamaantood ku fashilmaan, dabooli rucubo leh faashad.
Cadaadiska barafka: hoyga xilliga qaboobaha
Cabernet Sauvignon waxaa iska leh noocyo udgoon oo u dhaxeeya (geedka canabka ah wuxuu u adkeysan karaa heerkulka hoos udhaca illaa -30 ° C), laakiin marka koraan canab ee jiinka dhexe ee jiilaalka, waa in la daboolaa. На самом деле особенности повреждения виноградников в результате морозов - очень сложная наука, где важно не только то, насколько низко опускалась температура в течение зимы, но и то, насколько неожиданными и серьезными были осенние и весенние заморозки, какие ветры преобладали в течение холодного сезона и т. п.
Sidaa darteed, si aan khatar u ah, waa in aadan ka tagin beerta canab on trellis jiilaalka oo dhan.
Habka ugu fudud ee hoyga laga soo gooyo waa inuu dhimo. Waxaad u diyaargaroobi kartaa geedka canabka ah iyo meelo badan oo waqti u qaadan jiilaalku - ku daboolo kuraasta, xayawaanka, filimada iyo qalabka kale ee la macmalay, barkin ka soo cawska qallalan.
Waa muhiim! Hab kasta oo aad doorato, ma dabooli kartid geedka canabka ah ee caleenta qallalan, sababtoo ah kiiskan waxaad qabatid jiilaalka ugu fiican ee cayayaanka.
Daqiiqada canabkana leh filim sidoo kale waxay caddaynaysaa inaanay fiicneyn: Haddii aadan haysan fursad aad kuugu diyaarisid hawadaada caadiga ah ee geedka canabka ah, way kala jajabi kartaa loona jeexi karaa.
Isticmaal canab loo yaqaan 'Cabernet Sauvignon' si ay u sameeyaan khamri
Haddaba, ugu dambeyntii, waxa ugu fiicani waa goosashada iyo diyaarinta khamri.
Ma taqaanaa? Cabernet Sauvignon waa noocyo kala duwan oo canab ah oo khamri ah, ma aha mid ku haboon in loo isticmaalo sida macaan, sababtoo ah maqaarkiisa aan aadka u badneyn.
Sannadka sannadka ee Cabernet Sauvignon canab waxay ku xiran tahay waxyaabo badan, laakiin celcelis ahaan waxay qaadan doontaa seddex ilaa shan sano si ay u sugaan xilligii beerto.
Cabernet cabernet waxaa jecel dad badan: waxay leedahay dhaan a tartan iyo dhadhan dhadhan leh dareen ah ee currant. Runtii, qalabka da'da yar wuxuu u eg yahay midabka midabka, iyo dhadhankiisu aad ayuu u culus yahay. Cabitaanku muddo dheer ayuu bislaa, laakiin wakhti ka dib, wuxuu helayaa roodhida sharafta leh iyo bouquet aad u adag.
Maqnaanshaha (kudheerta maqaarka adag iyo lafaha) iyo carafka currant madow waa kaarka booqashada ee Cabernet Sauvignon.
Sida kor ku xusan, markii la diyaarinayo khamriga Cabernet Sauvignon, noocyo kale oo khamri ah ayaa badanaa lagu daraa cabbitaanka si loo waafajiyo dhadhanka, laakiin cabitaan tayo leh oo laga helo canabkuna sidoo kale waa la soo saaraa.
Ma taqaanaa? Marka la eego xeerarka hadda jira ee khamriga loo tixgelinayo noocyada kala duwan ee canabka, waxay ku filan tahay in ugu yaraan saddex meelood saddex meelood oo mid ah canab ah (sida uu qabo nidaamka Bodro, oo si buuxda oo saafi ah oo macaan ah loo isticmaalo, sida caadiga ah, ).
Faa'iidada laysku maandhaafsan ee noocyada kala duwan ee winemakers bilaabi waa saadaalin: in xaalad kasta oo geedka canabka ah u koraya, wax kasta oo lagu daro cabitaanka inta lagu jiro diyaarinta, qoraalka muhiimka ah Cabernet weli la aqoonsan karo.
Qodobka iyo tiknoolajiyada diyaarinta khamriga tayada sare ee guriga waa mowduuc loogu talagalay maqaal gaar ah. Talada kaliya ee aan jeclaan lahaa in la siiyo dadka bilowga ah: ka hor inta aanad iibsan khamriga dhabta ah, oo ku habboon soo saarista khamri cas, sababtoo ah khamriga cowska dabiiciga ahi waxba kuma laha cabitaanka sharafta leh ee aad ku diyaarsan tahay gacmahaaga, si taxadar leh u ilaalin tiknoolijiyada.
Khamrigu waa la diyaarin karaa oo kaliya canab, laakiin sidoo kale laga bilaabo macaanka iyo xitaa compote.
Sidaa darteed, markii aad go'aanka ku gaartey canabkiinna Cabernet Sauvignon on your stomach, aad naftaada ku daali doonaa dhibaatooyin weyn, laakiin bisha October waxaad soo qaadan doontaa cajiib cajiib ah khamriga tufaax tayo sare leh oo aad ku raaxaysato oo marti marti martiqaad khamri ah oo sharaf leh.